कोरोनाविरुद्वको पहिलो खोप लगाउदै टेकु अस्पतालका डा भण्डारी र बास्तोला – ThePressNepal
कोरोनाविरुद्वको पहिलो खोप लगाउदै टेकु अस्पतालका डा भण्डारी र बास्तोला
काठमाडौं माघ १३। भारत सरकारले अनुदान स्वरुप प्रदान गरेको १० लाख खोप माघ १४ गतेबाट देशभरका नागरिकहरुलाई लगाउने भएको छ । कोरोना विरुद्धको खोप अभियानको शुभारम्भ टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालबाट हुने भएको छ ।
बुधबार १०बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त अस्पतालबाट अभियानको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । कोरोना विरुद्धको पहिलो खोप अस्पतालका निर्देशक डा.सागर राजभण्डारी र दोस्रो खोप टेकु अस्पतालका प्रवक्ता समेत रहेका डा. अनुप बास्तोलाले लगाउने कार्यक्रम रहेको छ । डा.बास्तोला पहिलो कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने डाक्टर हुन।
नेपालमा चीनको उहानबाट आएका ३२ बर्षिय एक पुरुषलाई पुष २९ गते कोराना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । तर त्यसको औपचारीक जानकारी भने संक्रमित डिस्चार्ज भइसकेपछि माघ ९ गते गराइएको थियो ।
डा. अनुपको टिमले एक–दुई दिन उहाँलाई पञ्जा, मास्कबिना नै उपचार गरेका थीए । लक्षण मिलेको र संक्रमण फैलिएको स्थानबाट आएका उनलाई शंकाको घेरामा राखेर स्वाब संकलन गरी परीक्षणका लागि हङकङ पठाइएको थियो । २३ जनवरीमा उनको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो ।
सुरुमा कोरोना भित्रदा नेपालमा पीसीआर जाँच्न स्रोत र साधनसमेत थिएन भने अहिले देशभर ८० भन्दाबढी प्रयोगशालाबाट पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ । भोलि देशभरका ६२ अस्पताल र १ सय २० वटा खोपकेन्द्रबाट खोप अभियान सुरु हुनेछ ।
अभियान सुरु भएको एक हप्ताभित्र सम्पन्न गर्ने योजना सरकारको रहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा भने ११ वटा प्रमुख अस्पतालबाट खोप लगाउने योजना छ ।
उपत्यकाबाट खोप दिइने ११ अस्पतालहरु कुनकुन हो त?
Tags: अनुप बास्तोला कोरोना सागर भण्डारी
Previous देउवा र प्रचण्डसँग अमेरिकी राजदूत बेरीकाे भेट वार्ता
Next कांग्रेस केन्द्रिय समितिको बैठक पहिला नै पार्टी कार्यलयमा नेविसंघको प्रदर्सन